गोरु काटेर धरौटीमा छुटेकालाई वडा परिक्रमा गराई अभिनन्द - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
गोरु काटेर धरौटीमा छुटेकालाई वडा परिक्रमा गराई अभिनन्द
धरान । गोरु काटेको अभियोगमा पक्राउ परि धरौटीमा छुटेकालाई अभिनन्द गरिएको छ । पक्राउ जिल्ला अदालत सुनसरीबाट धरौटीमा छटेकाहरुलाई ढाका टोपी लगाएर सम्मान गदै जनअभिनन्दन गरिएको हो । पक्राउ परेर छुटेका निमा शेपा,आशिक राई, र तिलक राई बराहक्षेत्र नगरपालिका–३ नडाहामा खादा, अबिर र ढाका टोपी लगाएर जन अभिनन्दन गरिएको छ । पक्राउ परेको एघार दिनपछि धरौटीमा रिहाइ भएका तीनै जनालाई वडा परिक्रमा गराई कोणसभा समेत गरिएको थियो ।
अभिनन्दनपछि कोणसभामा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण समितिका संयोजक सुबास हुक्पाचोङ्बाङले संविधानमै संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य हुने उल्लेख भएको जनाउँदै गोरु काट्दा पक्राउ गर्नु संविधान बिपरित भएको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा किरात राई यायोक्खा बराहक्षेत्र नगर अध्यक्ष सञ्जय राईले धर्म निरपेक्षमा पनि मरेको गोरु काट्दा पक्राउ पर्नु घोर आपत्ति भएको बताए । राईले भने– खुल्ला रूपमा गोरु काटेर बेचेर खान नपाउने हो भने के को धर्म निरपेक्ष ? गोरु काटेको अभियोगमा जेठ १७ शुक्रवार अस्थायी प्रहरी चौकी बाङ्गेले पक्राउ गरि इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्र नगरले मुलिकी संहिता ऐनको चौपाया महल अनुसार मुद्दा दर्ता गराएको थियो । जनही पच्चीस हजार रुपैया धरौटीमा एघारौं दिनमा छुटेका थिए ।
साझाले ल्यायो विद्युतीय बस,काठमाडौंका मेयरसँग प्रधानमन्त्रीको सिंहदरबार यात्रा !
काठमाडौं । साझा यातायातले काठमाडौंमा विद्युत्तीय बस सेवा शुरू गरेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीवी)को आर्थिक […]
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको तत्काल राजीनामा माग गर्दै डा केसीको विज्ञप्ति(विज्ञप्तिसहित)
काठमाडौं । डा गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले तत्काल राजीनाम दिनु पर्ने माग गरेका छन् । […]
काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो, ठूलो र प्रशस्त जनशक्ति भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चरम लापर्बाही […]
राणा र लोहनीबीच पार्टी एकता हुने, कमल थापा ‘एक्लै’
काठमाडौं। पशुपति शमशेर राणा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी बिच पार्टी एकता हुने भएको छ । कमल थापा नेतृत्वको […]
भैंसीसँग मोटरसाइकल ठोक्किदा एक जनाको मृत्‍यु
असार २१ । काठमाण्डौ,काठमाडौंको सतुंगलमा सडकमा हिँडिरहेको भैंसीसँग मोटरसाइकल ठोक्किदा एकजनाको मृत्यु भएको छ […]